InVideo: Mepụta vidiyo Omenala Ọkachamara Maka Social Media N'ime Nkeji | Martech Zone
InVideo: Mepụta vidiyo Ọkachamara Ndị Ọrụ Maka Social Media N'ime Nkeji
Bọchị Sọnde, Machị 7, 2021 Bọchị Sọnde, Machị 7, 2021 Douglas Karr
Ma pọdkastị na vidiyo bụ ohere ịtụnanya iji soro ndị na-ege gị ntị na-emekọrịta ihe n'ụzọ na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ, mana nka imepụta ihe na idezi ihe dị mkpa nwere ike ịbụ mpụga ọtụtụ azụmaahịa - ịghara ịkọwa oge na mmefu.
Vidiyo nwere niile nke atụmatụ nke a isi video nchịkọta akụkọ, ma na kwukwara atụmatụ nke mmekota na ẹdude ndebiri na ego. InVideo nwere ihe karịrị ndebiri vidiyo 4,000 emere na ọtụtụ nde akụ (ihe oyiyi, ọdịyo, na obere vidiyo) ị nwere ike idezi, melite, ma budata iji nyere gị aka n'ịmepụta intros ọkachamara, outros, mgbasa ozi vidiyo, ma ọ bụ vidiyo niile iji mee. maka mgbasa ozi.
InVideo bụ nzube e wuru maka azụmaahịa, ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa, na ndị ọkachamara n'ahịa iji mepụta ma bipụta vidiyo ha n'ụzọ dị mfe. Ikpo okwu na-enyere gị aka ịhazi akaụntụ gị site na iji ụdị imewe gị ma jiri okwu wee mee ka ndebiri ndị ahụ bụrụ ihe ebido.
I nwekwara ike hazie akaụntụ gị site na iji akara ngosi, akwụkwọ edemede, na agba agba nke mere na a na-etinye ha n'ọrụ na ndebiri gị n'ụzọ dị mfe. Na vidiyo ọ bụla, ịnwere ike itinye ụda olu gị, vidiyo, ọdịyo, ma ọ bụ onyonyo ịchọrọ itinye - yabụ na ịnọghị na ndebiri ha ma ọ bụ ọbá akwụkwọ nke akụ.
I nwekwara ike ijikọ akaụntụ Facebook, Twitter, na Youtube gị wee bipụta site na ntanetị ozugbo ị nyochara ma kwado vidiyo a mechara.
Nweta 25% Ndenye aha InVideo gị
Nkeji edemede ka Video edezi
Otu ngwa ọrụ dị egwu ha nwere bụ ikike idetuo ma ọ bụ mado ederede, ma ọ bụ ọbụlagodi ederede ederede site na edemede. Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmepụta vidiyo dị mkpirikpi, dị nkenke na-etinye isi ihe sitere na edemede gị iji kwalite site na mgbasa ozi mmekọrịta.
Mee Ndepụta Ndepụta
Otu nnukwu ojiji nke a na-eme listicle videos… nke bụ nnọọ ewu ewu site na mgbasa ozi. Enwere m ike iru vidio a n'ihe dị ka nkeji 10, na-ebugote screenshots nke m ma jiri otu n'ime ndebiri ndezi nke InVideo:
Lee nke a na Instagram
A post na-akọrọ site Douglas Karr (@IGIHE)
Nchịkọta akụkọ akụkọ maka ịmepụta akụkọ ma ọ bụ ndepụta bụ ihe omimi na mfe iji. I nwedịrị ike ịpinye na edemede gị ma mee ka ọ bụrụ nke a na-emegharị anya site na ndebiri!
Intro na Outro Videos na Logo Reveal Templates
Taa, enwere m ike idezi ma mepụta obere animated logo na-ekpughe maka m Martech Zone vidiyo nke jiri akara InVideo gosipụtara ndebiri:
Enwere m ike gbanwee mkpụrụedemede, usoro iheomume nke ihe ọ bụla, yana ihe nkiri iji hazie vidiyo mara mma nke m nwere ike itinye ugbu a na vidiyo niile m na-ebipụta na Youtube!
Idenye aha na Martech Zone na Youtube
Otu esi emepụta vidiyo site na ndebiri InVideo
Njirimara onye ọrụ iji kpochapụ vidiyo gị dị mfe… họrọ ndebiri emere tupu, ndebiri ederede na vidiyo, ma ọ bụ bido ya na kwaaji oghere.
Ọ bụrụ n’ị na-achọ ndebiri, pịnye mkpụrụ okwu ole na ole iji chọọ otu. Nwere ike ịpị ma kpọọ nke ọ bụla na nsonaazụ ịchọta template ịchọrọ ịmalite na.
Họrọ oke nke vidiyo - obosara (16: 9), square (1: 1) ma ọ bụ vetikal (9:16).
Mee nhọrọ gị, hazie vidiyo ahụ, wee nwee ike ibudata ya ma ọ bụ bipụta ya ozugbo na Facebook, Twitter, ma ọ bụ Youtube.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhazigharị vidiyo ahụ, lee nnukwu ije gafere nke nhọrọ ikpo okwu. Enweghị ikike ọ bụla ma ọlị!
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhazigharị vidiyo ahụ, lee nnukwu ije gafere nke nhọrọ ikpo okwu. Enweghị ikike ọ bụla ma ọlị! Na… ị gaghị ekwenye ọnụahịa nke ikpo okwu… ọ bụ ihe ịtụnanya.
Oh… na ebe ị bụ onye Martech Zone Agụ, ị ga - enweta 25% ọzọ mgbe ị jiri njikọ m:
Ngọnarị: Abụ m onye Vidiyo Mgbakwunye (na ndị ahịa) na m na-ejikọ njikọ m n'isiokwu a.
Tags: Facebook ad onye okike vidiyoOnye mgbasa ozi vidiyo Facebooknchịkọta akụkọ vidiyo instagramonye mmeghembibiọkpụkpọ oku vidiyolisticle vidiyoonline video kereonline video nchịkọta akụkọonye na-eme ihe n'eziokwuonye nkwado vidiyoobere videoelekọta mmadụ media videoelekọta mmadụ videovideo ad kerevideo mgbasa ozionye na-eme vidiyovideo ndebiriIhe ntinye YouTubeYouTube video okike
Wzọ 5 Iji Jiri Ntị Na-elekọta Mmadụ Mee Ka Usoro Ọdịmma Gị Dịkwuo Mma
BE: Wulite ma budata Email Gị Na-aza Email Na-akwụ Onlinentanetị N'efu